“Ma Jirto Awood Hor Istaagi Karto Biyo-xidheenka Itoobiya…” Abiy Axmed Oo Dagaal Ugu Hanjabay Masar – somalilandtoday.com
“Ma Jirto Awood Hor Istaagi Karto Biyo-xidheenka Itoobiya…” Abiy Axmed Oo Dagaal Ugu Hanjabay Masar
Raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in dagaal lala galo Masar aanu xal noqoneyn oo loo baahan yahay in wax walba wadahadal lagu dhammeeyo, balse haddii ay suurageli weydo dalkiisu uu hayo malaayiin dhalinyara ah oo dagaal geli karta.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya ayaa maanta hortagay baarlamaanka dalkiisa iyada oo ay mudanayaasha baarlamaanka ay su’aalo ka weydiiyeen arrima badan oo ku saabsan xaaladda dalka Itoobiya uu ku sugan yahay.
Arrimaha wax laga weydiiyay waxaa ka mid ah xiisadda Masar iyo Itoobiya ka dhex taagan, xorriyadda saxaafadda, dorashooyinka, nidaamka federaalka, arrima la xidhiidha siyaasadda iyo bulshada Itoobiya.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey xaaladda ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya ee la xidhiidha muranka ka dhashay biya xidheenka weyn ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile wuxuu ku jawaabay in “shacabka Itoobiya aysan dooneyn in waxyeello ay u geystaan shacabka Masar, in ay wax taraan mooyee”.
Isagoo ka fogaanayay inuu ereyada dagaalka xoojiyo wuxuu yidhi “dagaalku xal ma aha, dagaalka Masar-na ma anfacayo, Suudaan-na ma anfacayo, innagana nama anfacayo.”
“Si kastaba ha ahaatee waxaan idiin sheegayaa ineysan jirin cid Itoobiya ka hor istaagi karto iney biya xireen dhisato,” ayuu yidhi Ra’isul wasaare Abiy Axmed.